Amniga magaalada Muqdisho oo faraha ka baxay | KEYDMEDIA ONLINE
Amniga magaalada Muqdisho oo faraha ka baxay
Laamaha ammaanka ayaa si buuxda ugu fashilmaya sugiidda amniga Muqdisho, tan iyo markii Aqalka hoose ee Baarlaanka uu maddada u kordhiyay Ha’adaha Dowladda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ayaa u muuqata mid faraha ka baxaday tan iyo markii ay dhalatay bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana joogto noqday dilka iyo qaraxyada ka dhacaya Caasimadda.
Marka laga yimaado, xasaradaha siyaasadeed iyo aragtiyada is diiddan ee Muqdisho marti galineysay, tan iyo 12-kii April, waxaa dhankooda sare u kac aan caadi ahayn sameeyay kooxaha fuliya falalka amni darrada, waana yar tahay maalin aan gobolka Banaadir, dad lagu dilin.
Maanta 22 April 2021, waxaa magaalada Muqdisho, lagu dilay Allaha u naxariistee, Dr Xasan Cismaan Ciise ‘Buurane’, oo ahaa dhaqtarka ugu caansan dalka, ee daweeya cudurada ku dhaca maqaarka.
Shalay 21 April 2021, waxaa magaalada lala dhacay madaafiic hoobiyayaal ah, gaar ahaan degmooyinka Boondheere iyo Warta-nabadda, waxayna ku kala dhaceen suuqii hore Warta Nabadda, Safaaradii hore ee Jarmalka, Xarunta godka Jilacow, Wasaaradii hore ee Caafimaadka iyo guryo kale oo dad rayid ah ay degan yihiin.
Ku dhawaad shan ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyooday duqeyntaas, halka in ka badan intaas ay ku dhaawacmeen, dabayaaqadii bishii hore ayay ahayd markii sidaan oo kale dad rayad ah lagu dhameeyay duqeyn ceyn kaan oo kale ah oo ka dhacaday degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
labo maalin ka hor, 20 April 2021, ayay ahayd markii guddoomiye ku xigeenkii Amniga iyo Siyaasadda ee degmada Deyniile, Cabdi Maxamed Maxamuud, lagu dilay miino lagu aasay dhulka, isaga oo marayay waddada aadda xaafadda Daarusalaam ee magaalada Muqdisho.
Dhawaan ayay ahayd markii Ex-Koontarool Afgooye, lagu dilay Guddoomiyihii degmada Xamar Jajab Maxamed Cabdi Axmed Xayle, oo hoyaad u ahaa xaafaddiisa, halka uu qarax miino uu ka badbaaday xoghayaha degmada Deyniile, Mahad Maxamed Shiraawe, isla todobaadkaas.
Waxaa muuqata habacsanaan amni oo aad u sarreysa iyo dayac aan u muuqan mid la buuxi doono, waxaana bishaan magaalada Muqdisho laga tabay, Ciidankii xasilinta ee fulin jiray howlgalkii loo yaqaannay ‘Nabad ku afur’, oo bil kasta oo Ramadaan, ka dhaqaan gali jiray Caasimadda.
Waxay u muuqataa in xaaladdu ka sii dari doonto maalmaha soo socda, maadaama aysan jirin diyaar garow muuqda oo looga hor tagayo kooxaha fuliya falalka amni darrada.
Wasiirka Amiga Dowladda Fadaraalka, Xundubey, wuxuu u muuqda shaqsi aan xil ka sarneyn aminga dalka gaar ahaan Caasimadda, waxaana la arkaa kaliya marka uu Farmaajo rabo in loo jawaabo mucaaradka.
Guddoomiye ku xigeynka Amniga iyo siyaasadda Gobolka Banaadir Cali Yare, oo maamulka gobolka u qaabilsan amniga, ayaa xilka uu ku fadhiyo aaminsan in loogu dhiibay difaaca Farmaajo, wuxuuna huriyaa xasaradaha, sida uu bartiisa ku sheegay 8 Febaraayo 2021.
Taliyihii Booliska Gobolka Banaadir, waxaa loo dhiibay, Farxaan Qoroole, oo hore uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab, waxuuna buuxiyay waraaq ay ku qornaayeen shuruudo, aan amni shaqo ku lahayn oo daneysi gaar ah iyo ku duulid dad gooni ah, kaliya ku qrnaayeen.
Taliyaha Booliska iyo Taliyaha Nabad Sugidda, waa labo ka mid ah shanta shaqsi ee dayaacadda sababay, waxayna xooggooda isugu geeyeen kaliya dagaalka ay kula jiraa Mucaaradka, waxayna si guud u dacayeen amiga, gaaar ahaan midka caasimadda oo ah halka kaliya oo ay ka howl-galaaan.